Kudzivirira kupfuurira mberi nekutsvaga dzimwe nzira dzisingatarisirwi dzeColombia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Kudzivirira kupfuurira mberi nekutsvaga dzimwe nzira dzisingatarisirwi dzeColombia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • tsika nemagariro • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
As KorombiyaNyeredzi yekushanya iri kuramba ichikwira - kubva pakunyora 2020 "inofanirwa kufamba" zvinyorwa kusvika katatu nhamba yayo yevashanyi vekunze kubva 2006 kusvika 2018 - saizvozvowo njodzi yekunyanyisa munzvimbo dzayo dzakakurumbira.
'Kufamba kweguta rechipiri' — muitiro wekufamba kuenda kumaguta asingazivikanwe zvakanyanya - kuri kuwedzera. Vanopfuura hafu yevashanyi vepasirese vanoda kubatsira kudzikisira zvakanyanya uye vangasarudze isingazivikanwe, yakafanana imwe nzira kune dzimwe sarudzo dzinozivikanwa kana ikadzora kukanganisa kwavo zvakatipoteredza. Uye muColombia, hazvina kuoma kuwana zvisingaite nzvimbo dzisina kuenda kuhutachiona.
Heano mapikicha epamusoro eColombia's 2020 mashoma-anozivikanwa nzvimbo dzekushanya kuti uone:
Chinjana Caribbean Vibes dzePacific Wildlife
Kana iwe uchifunga kuti munhu wese ari kushanyira Cartagena, uri kutaura chokwadi: guta rakachengetedzwa remakoloni rinogamuchira vanopfuura miriyoni vashanyi pagore; zvichemo zveruzha zvinobva munzvimbo dzakawanda dzemakirabhu ehusiku zvakajairika; uye matombo emakorari ari pedyo akaparadzwa nekuvandudzwa kwemahombekombe nemarara. Kuti uwane zororo remahombekombe risingawedzere kukuparadzwa uku, tarisa kune rimwe gungwa renyika - iyo Pacific - inosara iri pakati penzvimbo dzisina kuvandudzwa muColombia. Tarisa maorivhi ridley makungwa egungwa uchirovera snorkeling muUtría National Park uye nekuona kutyora zvinokanganisa kubva kumahombekombe, vanosvika kubva kuAntarctica pakati paChikunguru naNovember kuzobatana uye kubereka vana vavo.
Dzoka iyo Yakagadziriswa Caño Cristales yeCacao-Fueled Jungle Trek
Caño Cristales, rwizi inozivikanwa se "yakanyunguduka muraraungu" yehunhu hwaro hwakajeka, hune mavara, yakava nzvimbo inozivikanwa, inokwezva nzvimbo yekushanya mushure meChipupuriro chaRunyararo cha2016 gore rimwe chete gare gare, kupinda munzvimbo iyi kwakarambidzwa kubva kune traffic traffic iyo yakaremerwa ecosystem kubreak. Panzvimbo pekuwedzera zita rako kune avo vanomirira, tsvaga chimwe chiitiko chenguva ichangobva kuvhurwa: masango akakomberedza Puerto Berrio muAntioquia (padhuze neMedellín), imwe yenzvimbo dzakasiyana siyana dzemhuka dzesango dzeColombia. Shanyira purazi rekokoko remuno kuti uone kuti bhinzi inorimwa sei uye yoshandurwa kuita chokoreti, uye dzidza hunhu hwetsika uye kukosha kwembesa yecacao muColombia.
Dzivisa iwo Mapoka eBogota kuenda kuParty nevekwaPasto
Bogota ingaite senge isinganetsi kutonhorera pamwe nekushanya kwayo kwemabhasikoro, mahawafi echic uye mamiriro ekunze ane makomo, asi kuwanda kwevashanyi vekunze mumakore achangopfuura kwakazviisa pane runyorwa rwe "vanogadzira mambakwedza" - maguta ane chikamu chekushanya chiri kukura nekukurumidza kupfuura zvivakwa zvekubata kumusoro. Gore rino, deredza kusagadzikana nekushanyira nzvimbo isingazivikanwe kune vekunze: Pasto, rimwe remaguta ekare eColombia, ane mukurumbira kuColombia nekuda kweCarnaval de Blancos y Negros. Mutambo mukuru wepagore kumaodzanyemba kweColombia, kupemberera uku chiitiko cheUNESCO Chisingabatike Netsika Yemagariro. Dzidza nezve maitiro ehunyanzvi uye kuvakwa kweiyo hofori carrozas (mutambo unoyangarara) pachako kubva kune vanotora chikamu. shanyira Las Lajas Sanctuary, chechi yechechi yakavakirwa mumupata weRwizi Guáitara; ruzivo rwekugadzira mabasa munzvimbo dzemunharaunda; uye unakirwe nenzvimbo dzinodiwa senge empanadas uye cuy (guinea pig).